Gịnị bụ ezigbo ibu maka igwe kwụ otu ebe? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Igwe igwe - otu esi edozi
Igwe igwe - otu esi edozi
Gịnị bụ ezigbo ibu maka igwe kwụ otu ebe?
17 - 17.5 pound bụnkịtịnso. Ezigbo mkparịta ụka ahụ dị ihe dịka 1.5 ruo 2 pound. Arụ ọrụ nke ihe ọkụigwe kwụ otu ebeọ kasị ukwuu mgbe ugwu ahụ kasị elu.
Ugbu a ọ dịla anya mkpamkpa na ahịa maka igwe kwụ otu ebe na ọkụ na-acha ọkụ nke marala ama na ọ na-agba tankị ugwu, mana igwe kwụ otu a dị arọ ọ ga-erite uru n'ezie ma a bịa n'ịzọ ala ọzọ? Ọfọn, yabụ taa anyị ga-eleba anya ntakịrị site na ịgbakwunye ibu na ime nnwale ole na ole na igwe kwụ otu ebe iji hụ otu igwe kwụ ọtọ iji tụnyere igwe kwụ otu ebe mgbe anwalere ya. (Obi ụtọ dị ụtọ) Ọ dị ka ịnya n'elu akwa mmiri. (Obi Musictọ)) Ya mere, tupu anyị amaba na mmiri, ka anyị kewaa obere jargon taa.
Gba ọsọ ahụ ga-adị obere ma pere mpe ị ga-enwe mmetụta ya n'okporo ụzọ ndị a siri ike karị. A ezi ihe atụ nke a bụ ma ọ bụrụ na ị na mgbe nọkwasila e-igwe kwụ otu ebe, ndị ụdị batrị ndị ọzọ na mmezi ibu ndị dị na ndị a na-eme ka a ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-agba ịnyịnya na ọ fọrọ nke nta yiri ka ọ bụ obere kwa gburugburu nzọ ụkwụ ezigbo. Ya mere, anyị ga-anwa ịgbanwe sprung ka unsprung uka ruru iji hụ mmetụta ọ nwere n'okporo ụzọ site na ịtinye igwe dị iche iche.
Ọfọn, ụmụ nwoke n’oge gara aga anwalela itinye ịdị arọ n’elu igwe kwụ otu ebe, ụmụ okorobịa dị ka Chris Porter na ndị ọzọ. Tried gbalịrị itinye igwe na ala nke nkwado ala ya na kwa elu na azuokokoosisi. Maka nnwale taa, anyị ga-anwale ma ha abụọ.
Ya mere, nke a bụ nke abụọ anyị wiil, ha dị obere dị iche iche wiil mana ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ na agbakwunyela ndị rotors ahụ, anyị hapụkwara taya ahụ otu ihe iji belata esemokwu, naanị ihe dị iche bụ na ndị a bụ ihe dị ka kilogram abụọ mmiri na-agbasa n'elu ụzọ ahụ, nke ahụ dịkwa ọtụtụ na mbara igwe na-adịghị mma iji kpochapụ ma jupụta n'okporo ụzọ ahụ. Ọ ga-atọ gị ụtọ ịhụ otú nke ahụ si bụrụ. (upbeate music) (mmiri sloshing) Ọ bụ nnukwu ibu, ọ bụ ọtụtụ mmiri na-agba gburugburu. (Mmiri mmiri) kwesịrị ịbụ ihe ọchị.
Ugbu a bụ oge iji nweta nọmba niile dị mkpa ma tụọ ntakịrị, mana maka nke ahụ, anyị chọrọ igwe kwụ otu ebe. Ah, zuru oke. (Joy music) Ihe mbụ e jiri atụ ya bụ igwe kwụ otu ebe n’enweghị igwe ndị ọzọ, a gbanwere ya kpamkpam, yabụ ka anyị gaa lee ihe anyị nwere. (egwu dị ala) Dịka ị pụrụ ịhụ na etinyere ya n’enweghi ibu ọzọ, anyị gbakwunyere nkwado ala wee kwụfere akara kilogram abụọ, gụnyere eriri na igwe kwụ otu ebe. (Joy music) Ugbu a maka ntọala nke atọ anyị, nke ahụ na-enweghị ụkwụ dị arọ.
Cool, ya mere ọ bụ oge ule. Iji mee ka ihe dị mma ma ọbụlagodi dị ka o kwere mee, anaghị m agbanwe nrụgide taya na nke ọ bụla n'ime wiilị ahụ. Ma ntọala m kwụsịtụrụ bụ ihe m ga-esokarị, anaghị m agbanwe ihe ọ bụla na mgbakwunye agbakwunyere, nke ga-abụ ihe na-atọ ụtọ.
Ya mere maka ule mbu anyi na-agba ezumike na ihe ima aka. Ugbu a, m ga-amalite n’ugwu ma gbadata na ọsọ ọsọ ochie ma debe otu ọsọ ahụ oge ọ bụla n’egwuregwu m ebe a ma anyị nwere obere protocol a ka ọ bụrụ ebum n’uche anyị ma anyị ga-abụ brekya n’ebe ahụ. na-eche na onye ọ bụla ga-ahụ ogologo oge ọ ga-ewe iji kwụsị, ọ nwere ike ịbụ nnwale mara mma m chere na nke a. (egwu na-ada ụda) Ọ dị mma, yabụ anyị bịara, na-eme 15 mph na woohoo ugbu a.
Anyị brek. A bit arọ na n'ihu, ma anyị nwetara ya. Ọ bụ nke ya ma hụ ihe ọ bụ. (Joy music) Na na, na bụ n'ezie a n'ezie na-akpali ule, dị ka ị pụrụ ịhụ na m na-akwụsị ihe n'ihu karịa ngwaahịa igwe kwụ otu ebe ma ọ bụrụ na-amasị gị na nke ahụ bụ na kwukwara sprung ibu, na ihe n'ezie pụta ìhè bụ na n'azụ bụ 't tightened na n'ihu ọgwụgwụ adịghị na-aga otú mfe n'okpuru arọ braking n'ezie na-akpali ule maka gị, ndị ọzọ ibu emeghị ka ọ dị ukwuu mgbe braking. (Joy music) Bilie na ngwa ngwa.
Oh mma. Ọ dị mma, m ga-asị na ịzụrụ otu ihe ahụ dị ka igwe kwụ otu ebe, ikekwe ọbụlagodi obere oge. Na-akpali.
Echere m ọzọ na ị nwere nnukwu ibu n'okpuru. N'ezie jidere na obi ike sere brek n'ezie ike, mba na n'ihu ọgwụgwụ ga-asa ma na azụ ọgwụgwụ bụ n'ụzọ ụfọdụ n'okpuru akara, ọ bụ ezie na ọ na-ewepụ. Nnọọ na-akpali nnọọ mmasị ule.
ụzọ ụkwụ ịnyịnya ígwè
Ee jụụ. Ọ masịrị m. Oge maka ule nke abụọ na nke a bụ nsogbu ịrịgoro ugwu.
Ya mere, na ntọala atọ niile dị iche iche, yabụ anyị ga-amalite ebe njedebe njedebe anyị bụ maka ule nkwụsị anyị ma anyị ga-arịgo 100 mita ruo mgbe mbadamba ahụ dị, echere m na ị ga-ahụ ha. Lelee nke ga - abụ nwayọ nwayọ, ma ọ bụ ozugbo ọ malitere, ọ ga - adị mma, echekwara m na nke a nwere ike mepụta ụfọdụ ọnụọgụ na-atọ ụtọ. (egwu na-ada ụda) Atọ, abụọ, otu, na-aga. (upbeat music) Woohoo Ugbu a, nke a bụ igwe kwụ otu ebe m, na - agba ọsọ.
Na-enwe mmetụta dị mma nke mere na echeghị m na mods nwere ike iti ihe ahụ. (upbea t music) ato, abuo, otu. (Obi ụtọ na-atọ ụtọ) Oh chim, mana ị nwere ike ịnwe mmetụta ọzọ nke na-abịa n'ahịrị mgbe ị nwetara ya.
Odi, ato, abuo, otu. Zuru oke tank na mmalite. (Joy music) Oh sir ọ na-eche na anyị chọtara unsprung uka nke Achilles ikiri ụkwụ, na nke ahụ pụtara na ọ bụ ike iji nweta ya na-aga. (egwu dị egwu) WoohooSo ugbu a ọ bụ oge maka ule nke atọ na nke ikpeazụ anyị, nke m chere nwere ike bụrụ ihe na-atọ ụtọ.
Ma nke ahụ bụ ezigbo ule. Ugbu a, anyị nọ ebe a, anyị nwere ihe dịka otu mgbada nkeji. Anyị ga-anwa atọ anyị niile na-agba mbọ na ya ma jiri ọnụ ọgụgụ tụnyere ya, mana echere m na ọ bụ ebe a ka ntọala abụọ ahụ dị nro nwere ike ibute ma nwee nnukwu mmetụta na ịnya ụgbọ ebe a. (upbeat music) WoohooOkay mere ka m gwụchaa ọsọ nke abụọ m iji nwee ike ịnwekwu nkwusioru yana dịka ọdịiche pụtara ìhè ọ na-adị nke ọma karịa ma kwụsie ike mana n'ụzọ m ga-esi kwenye na ọ bụ nkịta ọ ga-enwerịrị ugwu di elu kari. (Egwu oma) Oh chim.
Ọ dị ka ịnya n’elu akwa mmiri. (Joy music) Oh chim. Ọ dị m ka m na-agba ịnyịnya.
Oh onyenwe m, m ga-anwụ. (egwu dị egwu) Ya mere, nke ahụ bụ njedebe ikpeazụ anyị na obere ọsọ anyị na-agba na mmiri na igwe kwụ otu ebe. Ya mere ndi mmadu ndi ozo adighi.
Ekwesịrị m ikwu eziokwu, ọ bụghị ọtụtụ ọchị. Ọ dị ka m nọ n'elu akwa mmiri, ọ dị ya ka ọ dị egwu na ọsọ ọsọ n'ihi na mmiri, ike ikuku, fọrọ nke nta ka ọ gbanwee igwe kwụ otu ebe site n'akụkụ ruo n'akụkụ. O mekwara ka o sie ike ijikwa igwe kwụ otu ebe.
Ya mere, echere m na enwere ike inwe ihe gbasara ịnwale ọnụọgụ mmiri. Ma ọ bụghị ihe na-atọ ụtọ maka ule a. (ọchị) Ma anyị nwere ọnụ ọgụgụ dị mma.
Ya mere, echere m na ugbu a bụ oge iji tụgharịa ya n'ime ụlọ ahụ, gbawaa ụfọdụ nọmba, wee hụ ihe anyị nwere. Ya mere, anyị abịaghachila ebe a n'ụlọ nkwusi na nwata ka m gụrụ ọtụtụ ọnụọgụ. Ya mere, buru ụzọ ka anyị lelee ịdị arọ igwe kwụ otu ebe.
Ugbu a igwe kwụ otu ebe m, enweghị igwe dị n'elu ya, dị ka ị hụworo, kilogram 14 na ọkara, ọ bụrụ na anyị agbachi ibu ahụ, ntakịrị karịa kilogram abụọ, nke mere na ọ bụ 16 na ọkara. Ugbu a na mmiri, nke ahụ bụ mmụba kasịnụ sitere na 14.5kg, igwe kwụ otu ebe m gbagoro na 18.06kg, yabụ nnukwu ọdịiche dị arọ nke m chere ga-eme nnukwu mgbanwe mgbe m na-arịgo, nke ahụ bụ n'ezie.
Ya mere nwalee otu, nke ahụ bụ ihe ịma aka braking anyị. Ọfọn, na-akpali mmasị, igwe kwụ otu ebe, nke bụ igwe kwụ otu ebe m na-emepụta, jisiri ike kwụsị na 18 na ọkara ụkwụ. Bikegbọ ịnyịnya ígwè ahụ nke na-eme ka ọ dị arọ dị ụkwụ 22.
Ma n'ezie, otu igwe kwụ otu ebe dị mita atọ na 21.5 n'ogologo, nke ahụ bụkwa igwe kwụ otu ebe na mmiri dị na ya, wiil ndị ahụ. Site na mgbakwunye agbakwunyere enwere ọtụtụ nkwụsi ike.
Ya mere, ihu nke mbụ anaghị asacha wiil azụ, ọ na-achịkwa ya ma nwee ike idobe ya nke ọma na ala ma ka mma na brekị. Ya mere mara mma na-akpali, ọ bụ ezie na m ka na-eche ma ọ bụrụ na ị ọgbaghara gburugburu na a ibu nwere ike ịbụ na ị nwere ike ịhụ a bit nke a ụtọ ntụpọ.
Nwale abuo ma nke ahu bu nsogbu anyi n’ile. Ugbu a, ngwaahịa m na-arịgo n'ebe anyị setịpụrụ na nke ọ bụla n'ime 7.7 sekọnd, igwe kwụ otu ebe abụọ ANYun bounced this weight 8.2 sekọnd, ya bụ ihe dị ka 0.5 nwayọ nwayọ.
Ya mere, n'ozuzu zuru nke zuru nwayọ karịa ihe na-erughị 10 sekọnd bụ nnukwu oghere. Ihe kpatara nke ahụ bụ na nnabata nnabata dị ukwuu ọ gara, ọ dị nwayọ nwayọ ma wee laa ọsọ ọsọ. Enwere ike dị ukwuu na ya iji mee ka ọ gaa ma mee ka mmiri na-atụgharị.
Mgbe ọ bịara ngwa ngwa ọ dị mma, mana n'ahịrị, ọ bụ ntakịrị nkịta, yabụ nke atọ na n'ikpeazụ anyị nzọ ụkwụ ịma aka e.Ugbu a anyị edeela ụzọ ụkwụ a maara nke ọma, nke m nwere edere ọtụtụ ugboro. Echere m na ọ dị ihe dị ka nkeji oge, ọ dị ntakịrị karịa, karịa 42-38 sekọnd ala.
Bike kwa, ya mere nke a bu ihe ozo nke nwere otutu ihe gbara ososo ya na ukwu ya, ya bu 41 sekọnd. Ugbu a, ihe na-adọrọ mmasị ebe a, n'agbanyeghị na ọ dị sekọnd atọ nwayọ, igwe kwụ otu ebe nwere mmetụta dị nro dị nwayọ ma na-achịkwa karịa mgbe ị na-eme ihe na-adịghị mma. Yabụ n'ezie na ọ mere nnukwu ọdịiche ebe ahụ.
Echere m na igwu gburugburu na ibu nwere ike ịchọta ebe dị ụtọ na nke ahụ, echekwara m na nke ahụ nwere ike bụrụ nke kachasị dị irè na wiil anyị dị arọ na-enweghị atụ, 46 sekọnd, dị nwayọ nwayọ. Ihe kpatara nke a abụghị nke kachasị na ngalaba a nke ụzọ ọ bụla, yabụ na ị ga-esi ike na egwu ahụ dịka anyị tụlere n'ihe ịma aka anyị na-arịgo, mana ọ na-echekwa na mmiri dị ukwuu sl Ndị agha na-abanye na Swirling na-ehi ụra dị nnọọ mere ka igwe kwụ otu ebe, karịsịa na ikuku, ya mere ka 46 sekọnd. Yabụ ngụkọta nke sekọnd asatọ nwayọ nwayọ, nke bụ nnukwu oge n'oge dị mkpirikpi.
Odi mma ka anyi ichikota ihe anyi mutara. Ọfọn, igwe kwụ otu ebe m, a na m ejikarị ya agba nkịtị ma ọ bụghị ihe ijuanya na ọ na-akụda oge ọ bụla. Ihe dị ịtụnanya bụ ebumnuche na-agbakwunye na-agbakwunye ibu na azuokokoosisi na ala nkwado, ihe ndị dị ka nke ahụ.
Echere m n'echiche na enwere ihe ọ bụla. Echere m na ọ bụrụ na iji ọnọdụ na ịdị arọ gwọọ gị, ị nwere ike ị nweta elele site na ịmela ụmụ gị, m na-akwụwa aka ọtọ, enwere mmetụta ọfụma ma ọ bụ nke ọzọ. Ọ na-adọkpụkwu, ị na-aga nwayọ nwayọ, ọ na-esi ike karịa n'ihi na o doro anya na ị na-ebuwanye ibu.
Ma agbachitere m na-eche n'ezie na sprung uka nwere ọtụtụ ikike dị ka o doro anya na ọtụtụ ndị anwalewo tupu oge eruo, n'agbanyeghị ebe ị na-egwuri egwu, ole ibu ị na-ewere, mgbe ị nwere oge, gaa ntakịrị miri na nkwusioru na alingnagide nrụgide taya, echere m na ị nwere ike ịchọta ntọala kachasị mma. N'ozuzu, M na-eleghị anya, na-edebe m igwe kwụ otu ebe, M ga-agbakwunye ọ bụla igwe n'oge ọ bụla dị ka ọ bụ ihe ụbọchị niile nzọ ụkwụ bike na dị nnọọ eburu mmezi ibu. Daalụ maka ilere edemede a.
Enwere m olile anya na ị bara uru. Ma ọ bụrụ na ị nwere nkwupụta ọ bụla ma ọ bụ gbalịa itinyekwu arọ na igwe kwụ otu ebe gị, mee ka anyị mara na nkwupụta ahụ, nke ahụ ga-adị mma ịnụ. Echefula inye anyị mkpịsị aka, pịa Denye aha, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọgide na-ekiri GMBN pịa isiokwu ndị ahụ ugbu a.
Ọ dị 11kg arọ maka igwe kwụ otu ebe?
Okporo ụzọ dị mmaigwe kwụ otu ebega-abụkarị kilogram 10 ma ọ bụ obere. Aluminom etitianyịnya igwega-abụ 10 n'arọ ma ka ị gbanwere na carbon carbon ndị igwe na-agbada. Ya mere azịza nye ajụjụ gị bụ 13 n'arọ bụarọmaka uzoigwe kwụ otu ebe.
GCN na-eme sayensị.- # data.- Oge ụfọdụ gara aga anyị nwalere nsonaazụ nke ịdị arọ igwe kwụ otu ebe na ọnụego ịrịgo, mana na ọnọdụ nyocha.
Ma ọ bụ ezie na nke a bụ ụzọ kacha mma iji nwalee ya, ọtụtụ n'ime anyị ka chọrọ ịhụ ihe nsonaazụ dị n'okporo ụzọ mepere emepe - na ebe ka mma ime nke ahụ karịa ebe a na Colle del Sestriere? Ọnọdụ nke ọtụtụ ọgụ na Tour de France na Giro d'Italia 2015. - Ee. Ya mere, ihe anyị ga - eme Matt na m ga - eme agba abụọ nke ịrị ọ bụla.
Ọ dị ihe dị ka kilomita asatọ n'ogologo, nkezi gradient nke ihe dịka 7%. Aga m eji ịnyịnya ígwè Garmin m mee onwe m ka m jiri ike na-agba ọsọ ma m ga-eme nke abụọ na kilogram abụọ nke ballast na igwe kwụ otu ebe m wee nwee ike iji oge tụnyere oge m ga-eme otu ihe ahụ. , ma igwe ike m ga-anọ ebe a, ụlọ akwụkwọ ochie, ihe niile na-eche n'ihi na echere m na nghọta ka bara uru ma dịkwa oke mkpa.- Ee, ị kwụrụ n'ụtụtụ a? Oge ụfọdụ n'ihi na anyị doro anya, mana ọ mara mma nke ukwuu ma ọ dị m mma ịga - Ka anyị jiri ụkwụ ntakịrị. ♪ - Igwe igwe kwụ otu ebe gafere kilogram 6,920 na-enweghị ibu, wee jiri karama mmiri zuru ezu, 7,595.
N'ikpeazụ, na mgbakwunye ballast, ọ na-abịa 9,505. Yabụ na nke ahụ dị iche n'ihe dị ka kilogram abụọ ma ọ bụrụ na ị ga-eburu mmiri mmiri zuru ezu na agba abụọ ahụ. Ya mere, gburugburu otu, ballast igwe kwụ otu ebe, ka anyị nye ya a okuku. ♪ - Naanị m na-anwa idebe ụda dị mma, na-eme ka iku ume m na-achịkwa, nke siri ike karịa na elu karịa ka ị chere.
Mana echere m na achọtala m ọkwa dị mma nke m nwere ike ijidesi ike maka ọkara elekere. ♪ - Na na na, mgbe ahụ na-agba ọsọ mbụ, ìhè bike. Ka anyị nwalee ya. ”“ Ọ na-adị ka ọ dị njọ inye nkwado m. ”“ Ọfụma, agba nke mbụ agafeela.
Nke ahụ siri ike. Nke ahụ bụ ịrị elu mara mma, ọ bụghị ya? Karịsịa na ịdị elu, mana nke ọma, ka anyị mee ya ọzọ - N'ezie. Ọfọn, anyị mere atụnyere na ụkwụ nke abụọ, mana echere m na echere m na a ga-achọ ngwa ngwa ngwa - igwe kwụ otu ebe gafere kilogram 7.3 ma yana Garmin Virbon na njikwa ahụ.
Na karama ọ na-eweta ya na 7,875, ya na ballast ọ na-atụle ihe dị ka kilogram 9.8. ♪ Ọ na-adị m ka ọ ga-esi na sadulu ahụ pụọ.
Nwere ike ịnwe ibu arọ nke igwe kwụ otu ebe. Kpamkpam imi oghere n'ihu. ♪ - So, rịgoro nọmba abụọ na-abịa, dị nnọọ olileanya gị ụkwụ jide si.
Ka ahụ ma emechaa. M na-agbalị ịnọgide na-enwe otu mgbali, na-aghọta mgbalị, ya mere, ọ bụ ike ma na-eku ume na-achịkwa, ma bike na-eche a bit Mkpa ọkụ na ndị ọzọ bubbly na nkpoda ngalaba. Echere m na m ga-agba ntakịrị ọsọ ọsọ, oge ga-agwa. 'Ewela iwe, enweghị m ike ikwu okwu. - Ọ dị mma.
Ugbu a nsonaazụ ya dị, mana tupu anyị enye ha ha, anyị ga-ekwusi ike na nke a abụghị ule a na-achịkwa. Yabụ nke a bụ naanị maka mkparịta ụka. Anyị enweghị ike ịkọwa ihe dịka ifufe ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya, mana ọ ka na-atọ ụtọ.
N'ihi ya, m ji ịnyịnya ígwè m jiri nkezi ike nke 320 watts na agba abụọ ahụ. Na ịnyịnya ibu dị arọ karị, m dị 35 sekọnd nwayọ. Yabụ na ọ naghị ada ụda.
Nke ahụ bụ naanị ihe dịka 2% nke oge m niile. Mana Matt, n’aka nke ọzọ, nwere mmasị n’ezie nye Matt. - Nke ahụ bụ ya.
Ọo ya bụ, mu gude ịnya-ọgu. Ejere m ụkwụ na nkeji na nkeji atọ ọsọ ọsọ. Ọfọn, nke ahụ bụ maka otu ihe a na-ahụ anya, ya mere n'ihe metụtara na ọ bụ ihe mgbu n'ụkwụ m na iku ume m, nke ahụ wee dịrị otu ebe ahụ.
Na ebe m chọpụtara na ihe dị iche bụ mgbe ụzọ rịgoro n'elu 7%, 8% incline na igwe kwụ otu ebe chere a otutu ihe anabata na m nwee ike iji a ibu gia na steeper akụkụ. Echere m na m jidere oge ahụ. - Ọfọn, na ọbụna ihe na-akpali bụ na ọ bụ nke abụọ gị na-agba ọsọ mgbe ị nọ na Mkpa ọkụ igwe kwụ otu ebe, otú i nwere ike na-eche na gị na ụkwụ na-a bit ike gwụrụ e.
Yabụ, nkwubi okwu. Ọfọn ma ọ bụrụ na anyị na-achọ arụmọrụ na-enweghị atụ, anyị nwere ike ịhụ n'ụzọ doro anya na igwe kwụ otu ebe dị ọsọ ọsọ na ịrịgo ahụ, mana ọdịiche ahụ abụghị nnukwu dị ka ịchọrọ. Mana ọ bụrụ na ọ bụghị naanị obi ụtọ ma chọpụta mmegharị, ọ mere ụwa dị iche - ọ mere n'ezie - Yabụ ọ nwere ike ịnọ ebe ahụ.
Igwe na-acha ọkụ ọkụ ga-eme ka ị gbaa ọsọ ọsọ, mana ọ ga-adị ọsịsọ karịa. Nke a bụ ahụmịhe anyị, mana anyị ga-echebara ihe ị chere echiche. Iji maa atụ, ị zụtala obere ịnyịnya ibu na nso nso a ma hụ ihe dị iche? Mee ka anyị mara na ngalaba nke dị n'okpuru. - Ee, ma maka akụkọ ndị ọzọ gbasara GCN Ndi Sayensị, pịa ebe a.
Kedu ihe bụ nnukwu ihe dị iche, igwe na-acha ọkụ ma ọ bụ ahụ ọkụ? - Otú ọ dị, anyị maara n’ezie na ụkwụ gị nwere ike ịbụ nnukwu ihe dị iche ịme, yabụ ahapụkwala ọzụzụ gị. Lelee ndepụta ọkpụkpọ ọzụzụ GCN n'okpuru - ma cheta ịdenye aha na GCN, ọ bụ n'efu. Kedụ maka ịpị ụkwụ ụkwụ anyị ike gwụrụ? Hụnanya niile ahụ, ọmarịcha ugwu mara mma.
Abụ m nri ehi, nri? - Ee, Pizza? - O doro anya na cappuccino. Ka anyị gaa gburugburu abụọ. Ka anyị nwee olile anya na ụkwụ ga-ejide.
Aga m ahụ gị, nnukwu. N'ebe a, nke a n'ezie na-eme ka ntutu m dị. Anyị enwere ike ịnwale ọsọ? - understand ghọtara nke ahụ? - Eeh.
10kg dị arọ maka igwe kwụ otu ebe?
Mụ onwe m na-atụle na 10.0 n'arọ bụ “mara mmaarọ”Maka ụzọanyịnya igwen'oge a na oge a. Ọ dịla ihe dịka 40%arọkarịa agbụrụ agbụrụanyịnya igwe. Ọ bụrụ na ị na-arị ugwu, kilogram ọ bụla ga-adọta gị. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya kpụọ ibu na imefu ọkụigwe kwụ otu ebe, mgbe ị na-ebelata ibu gị (mana debe ike).
Ego ole ka igwe m gbara?
Ibu ibunkekaahụkarị ụzọigwe kwụ otu ebedị nankezi18 pound, gụnyereihepedals na ngịga. Ndị aanyịnya igweEzubere maka ịnyagharị n'elu ihu ma na-enwekarị ogwe osisi ọkụ na obere taya.
Ndi kilogram 25 di arọ maka igwe igwe igwe?
25lbs abụghịarọ. Ok ọ bụ mana ọ gaghị egbusi gị. ụdị ego ahụ nwere ike ị nweta ezigbo mmaanyịnya igwe. Lelee Pụrụ iche / Trek / Cannondale.Eprel 13 2007
Mbelata ịnyịnya ígwè ọ dị mkpa karịa ibu ahụ?
Ihe bụ isi: ỌnwụbodyweightbuỌzọbara urukarịaidobeibu igwena njem dịtụ larịị. Ma ozugbo ụzọ ahụ gbagoro, ọ na-enye aka na-atụfuigwe kwụ otu ebenabodyweight, ọ bụrụhaala na ị nwere abụba ịhapụ.
Kedu otu arọ siri oke ibu maka igwe kwụ otu ebe?
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịmalite ịgba ígwè, buru n'uche nke kachasịanyịnya igweEzubere maka ndị na-erughị kilogram 220. Akwụkwọ ikike na ọtụtụanyịnya igwena-efu efu ma ọ bụrụ na onye na-agba ya bụburu oke ibu. Ọ bụrụ na ị dị mkpaarọkarịa 220 pound, chee echiche inweta aigwe kwụ otu ebeEzubere makaarọndị mmadụ.Mar 14 2017
20kg dị arọ maka igwe kwụ otu ebe?
You're na-achọ ntụle nke gburugburu20kg, na ụfọdụ dị arọ karịa 5kg karịa nke ahụ. Nke ahụ bụ ọtụtụigwe kwụ otu ebena-agagharị, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-ebi elu ụgbọ elu ole na ole ma ọ bụ na ị ga-ebuli gịigwe kwụ otu ebejidesie ya ike, ma ọ bụ banye n'ụgbọala gị, ma ọ bụ banye n'ụgbọ oloko.Mar 10 2017
Ọ bụ kilogram 10.5 dị arọ maka igwe kwụ otu ebe?
ibu ibu nkeigwe kwụ otu ebebụ ezigbo ihe ikpeazụ ị chọrọ iche banyere ma ọ bụrụ na-echegbu onwe banyere ibu n'ozuzu. ọtụtụ mmadụ nwere ike ida 2kg gburugburu n'úkwù mara mma n'ụzọ dị mfe. ga-adi otutu onu ahia ma di mfe karia itughari 9kgigwe kwụ otu eben'ime otu 7kg otu. ọtụtụ ụzọanyịnya igwega - adị 7 - 9kg, mana ọ nweghị ihe ga - echebiga echiche ókè.Jenụwarị 31. Dec 2019
Bụ 24 inch ịnyịnya ígwè n'ihi na ndị okenye?
Nwanyị nwere ike ịgba ịnyịnya24-inch igwe kwụ otu ebemgbe ọ osobo arọ ibu na ya elu bụ dakọtara naigwe kwụ otu ebe. Ọ bụrụ n ’ọ na - esiri gị ike inwetaokenye igwe kwụ otu ebe, wee họrọ maka a24-inchụmụakaigwe kwụ otu ebenwere ike ịbụ a loophole gị.Sep 2 2020
Kedu ihe dị arọ nke igwe kwụ otu ebe?
Nke a bụ eserese igwe kwụ otu ebe: kedị kedị Ugbo Ala Bike 17 pound (7.7 n'arọ) Ngwakọ / Nkasi Obi Bike 20 pound (9 n'arọ) Triathlon / Oge nzọ ụkwụ Bike 20 pound (9 n'arọ) Track / ofu Gear Bike 21 pound (9.7 n'arọ) 10 ọzọ ahịrị
Ebee ka m nwere ike ịhụ ole arọ igwe kwụ otu ebe gafere?
Ihe edetu na-ekwu 'Ego ole ka igwe kwụ igwe X? pụrụ ịchọta ọ fọrọ nke nta ọ bụla ịnyịnya ígwè metụtara ozi osisi. Ọtụtụ mgbe, a na-ekwuputa otu akụkụ ahụ ọtụtụ ugboro n'ihu na bọọdụ ahụ. Yabụ, gịnị kpatara na enweghị ebe nrụọrụ weebụ edepụtara ihe mejupụtara & nkwupụta ụda; igwe igwe igwe?
Gịnị bụ nkezi nke ịdị arọ nke igwe cyclocross?
Ngwa ndị a na-eweta ịdị arọ dị elu karịa na ọkara nke 44 pound. Site na taya na nkpuchi na-apụ n'okporo ụzọ, igwe kwụ otu ebe na-ebu ihe dị ka kilogram 22. Ọ dị mkpa ka ịnyịnya ígwè ahụ dịrị arọ ebe ọ bụ na egwuregwu ahụ chọrọ ka onye na-agba ya weda ma buru ya gafee ihe mgbochi na obere oge.